फेडरिघी भन्छन् कि M1 को साथ Macs मा Windows मा Microsoft मा निर्भर गर्दछ म म्याकबाट हुँ
क्रेग फेडरिही एक अन्तर्वार्तामा आश्वस्त गराएको छ कि M1 को साथ म्याकमा विन्डोज नेटिभ चालु मात्र Microsoft मा निर्भर गर्दछ। यसले हामीलाई घिसार्यो। यदि माइक्रोसफ्टले आफ्नो विन्डोज एआरएमलाई एम १ प्रोसेसरमा रूपान्तरण गर्‍यो भने एप्पल कुनै पनि हालतमा खराब हुँदैन। यो एप्पल सिलिकॉन को एक अतिरिक्त मूल्य हुन सक्छ। अर्को एउटा।
किनभने केहि म्याक प्रयोगकर्ताले कुनै कारण वा अरू कारणले प्रकार्य प्रयोग गर्दैनन् बुट शिविरमा र तिनीहरू विन्डोज उनीहरूको कम्प्युटरहरूमा म्याकोससँग समानान्तर रूपमा चलाउँछन्। खास गरी ती जो टेलिकमूट गर्छन्, र तपाईंको कम्पनीको सफ्टवेयर मात्र माइक्रोसफ्टसँग मिल्दो छ।
होलीभोडमा जब एक नयाँ चलचित्र रिलीज हुन्छ, कलाकार र निर्देशक प्रायः मिडियामा सुँगुरहरूसँग अन्तर्वार्ता दिन्छन्। अब यस्तै केही कुरा हुँदैछ Cupertino, एप्पल सिलिकॉनको प्रीमियर पछि। ARS Technica भर्खरै चीफ सफ्टवेयर इञ्जिनियरिंग क्रेग फेडरिघी, हार्डवेयर टेक्नोलोजी नेता जोनी श्रोजी, र मार्केटिंगका उपाध्यक्ष ग्रेग जोसवियाकसँग अर्को साक्षात्कार प्रकाशित भयो।
न त एप्पल न माइक्रोसफ्टले कहिल्यै बूट क्याम्पको विरोध गर्यो Win-win, तिनीहरूले भन्नेछन्।
धेरै जसो अन्तर्वार्ताले हामी सबैलाई म्यासको नयाँ सुविधाहरूको बारेमा थाहा छ भनेर कुरा गरेको छ एप्पल सिलिकन, तर म्याक एम १ मा माइक्रोसफ्ट र विन्डोजको बारेमा फेडरिहीबाट रोचक विवरण छ। हालमा, म्याक एम १ विन्डोजसँग उपयुक्त छैन र त्यहाँ कुनै बुट क्याम्प समारोह छैन किनकि त्यहाँ ईन्टल म्याकहरू छन्, र तथ्य यो हो कि विन्डोजको लागि समर्थन एउटा सुविधा हो जुन धेरैले उनीहरूको नयाँ एप्पल सिलिकन म्याकहरूमा हेर्न चाहन्छन्।
फेडरिहीले उक्त टिप्पणीमा टिप्पणी गरेको छ Windows M1 Macs मा यो केवल माइक्रोसफ्ट मा निर्भर गर्दछ। मुख्य टेक्नोलोजीहरू अवस्थित छन् र म्याकहरू यसको लागि सक्षम छन्, तर माइक्रोसफ्टले यसको एआरएम-आधारित संस्करण विन्डोजको म्याक प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने कि नगर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ।
विन्डोज को M1 मा नेटिभ चलाउन सक्षम हुनु को लागि, "यो वास्तव मा निर्भर गर्दछ माइक्रोसफ्ट", भने। उनले थपे: “हामीसँग ती टेक्नोलोजीहरू छन्, विन्डोजको एआरएम संस्करण चलाउन, जसले पक्कै पनि x86 प्रयोगकर्ता-मोड अनुप्रयोगहरू समर्थन गर्दछ। तर त्यो एउटा निर्णय हो जुन Microsoft ले गर्नुपर्दछ, त्यो टेक्नोलोजीलाई इजाजतपत्र दिनुहोस् ताकि प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई यी म्याकहरूमा प्रयोग गर्न सक्दछन्। तर म्याक्स पक्कै पनि यसको लागि धेरै सक्षम छन्।
उनले क्लाउडमा विन्डोज भविष्यमा सम्भव समाधान हुन सक्छ भन्ने भन्दै यो विषय टु conc्ग्याए र क्रसओभरलाई हाइलाइट गरे, जसले एम १ म्याकमा रोसेट २ को प्रयोग गरेर विन्डोज x86 applications एप्लिकेसनहरू चलाउन सक्षम छ। मलाई पक्का विश्वास छ कि एप्पल र माइक्रोसफ्ट सहमत हुनेछन्। माइक्रोसफ्ट यसको हुनुमा धेरै लामो यात्रा गर्यो कार्यालय M1 को लागि नेटिभ तयार छ, त्यसैले तपाईं एप्पलको नयाँ प्रोसेसरसँग मिल्दो विन्डोज एआरएमको केहि हजार लाइसेन्स बेच्न चाहानुहुन्छ। यदि होईन भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक ओएस एक्स » बुट शिविरमा » फेडरिघीले M1 Macs मा नेटिभ विन्डोज माइक्रोसफ्ट मा निर्भर गर्दछ भन्छ
यसले हामीलाई पक्रियो! त्यो प्रश्न हो। अन्त्यमा र अनिश्चितताको सामना गर्दै, मैले M1 का साथ मेरो नयाँ म्याक फिर्ता गर्ने निर्णय गरें किनभने मलाई थाहा छैन कि म यसमा विन्डोज चलाउन सक्छु। हो ... हामीलाई थाहा छ समानताहरू परीक्षण गर्दैछ, तर इजाजतपत्र मुद्दा त्यहाँ छ।
छोटकरीमा, यदि पानी च्यानलमा गयो जुन प्रयोगकर्ताले राम्रो गर्दछ, राम्रोसँग ... तर ... पर्खनुहोस्!
टोनी कोर्टेस भन्यो
कस्तूरी, तपाईलाई धेरै विन्डोज चाहिन्छ म्याक फिर्ता गर्न र समाधानको लागि कुर्नु हुँदैन। मलाई आशा छ कि यो चाँडै नै बाहिर आउँदछ र तपाईं यसलाई फेरि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ।
टोनी कोर्टेसलाई जवाफ दिनुहोस्
M1 को GPU, M1 को साथ एप्पल बचत र अधिक। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ